Antalya Lawyer | Mehmet Dursun Law Office, Mediation Office
chinangwa chedu ndechokuti kudzivirira kodzero yamarudzi ose vanhu vose mumatare enyika, kodzero kuti muridzi nokukurumidza uye kukupa kupfuura pamutemo nzira, kodzero kutora matanho anodiwa kare kuti vakarasika uye kutungamirirwa kuti mapato uyewo kupa zvakakodzera mazano.
Kushanda Maawa Mon-Sat
Unogona kutitaurira pane imwe neimwe.
Antalya Lawyer, kutevedza mutemo uye kushanda. Gweta Antalya
Antalya Criminal Advocate - Mutongi Mukuru Wekuda Mhosva uye Muteresi Mhosva
Antalya IT Advocate - Mhosva dzeIndaneti Inotsigira
Antalya Cancellation Case Case Attorney, Compensation Law Case
Kusaruramisira Murevereri, Utongi Wehutano, Utano Mutemo Murevereri
Antalya Labor Advocate, Employ Advocate, Business Case Mutambi
Gweta kuMutemo muAntalya
MHURI NEZVO ZVINOITA
Antalya Kurambana Kurudzira, Alimony, Mutemo Wokutsigira
ECHR Yese Yokushanda
Idea Art Works Mutemo
Antalya Patent Attorney, Idea uye Art Works Murevereri, Mutengesi Mutengesi,
Mutevedzeri Murevereri, Mutevedzeri Mutevedzeri Antalya
Antalya Real Estate Advocate, Real Estate Gweta, Land Advocate
Muteresi Mutero, Muteresi wemitero
magweta edu Iwe unokwanisa kutaura kuti uone.
vachatongwa mu Nyanzvi dzemagweta edu anogara ari newe.
Antalya Gweta Firm, kwemitemo, mutemo zvokutengeserana, mashoko michina mutemo, mutemo mhuri, Real Estate mutemo uye payables vari kunyanya pamutemo mapazi ose mutemo uyewo vanoziva dzakawanda chisarudzo dare anopawo pamutemo shanduro minamato zviitwe uye kutengesa zvivako pasi vatorwa. hofisi yedu vachangobva yakagamuchira kurumbidzwa kukuru munyika chaivo mari, rakapotsa mari uye rakapotsa mari exchanges migodhi, zvigadziriswe. kuti zvichemo penhau iyi uye rinopawo Consulting mabasa anoenderana inivhesitimendi.
Turkey uye Antalya uyewo Dursun Mehmet yose sezvo kwedu chinangwa Advocacy Office, pose kutora matanho kunzvenga kurasikirwa kodzero dzedu nemakasitoma, kana kodzero dzavo dzave kwaitirwei ndiko dzosera zvokuti maoko mutemo.
Murevereri - Gweta - Mutengesi Wechechi
Gweta Kadriye ERSOY
Antalya Mutongi Kadriye Ersoy
Mutevedzeri Zeki Dursun
Ona Ze Profile yaZeki
M.Cüşavir Bilal akapfeka
Mutariri wezveMari Bilal Kilim
Ziva. uye Software Consultant
Samet EFE - Ruzivo Ruzivo
Ane mamita. Davut Dursun
Ona Purogiramu Yakazara yeAlina
Bata Emel zvakananga
Ona Purogiramu Yakazara yeTuran
Ona Profile Yakazara yeChoğlayan
China - Germany - Ukraine - Russia - Algeria - Tunisia - India
Nzvimbo dzedu dzeUnyanzvi Iva nemigumisiro yakabudirira
Munhu wese angave asina kubudirira munharaunda dzose, asi kana une nyanzvi imwechete mundima yavo uye iwe ukavasiya kune unyanzvi hwebasa, kubudirira kunewe.
Cases uye Specializations
ZVINOKUDZIDZWA NEZVO RUKURU
BHUKU RAKATAURA MITEMO
Ona zvese zvidzidzo
NZVIMBO DZOKUDZIDZWA KWEMISORO
MHURI NEVANHU VAKASIMBA
BASA NEMUBHANDI WOKUDZISA MUNAWARI
MAZANO NEZVIMWE ZVINOKOSHA MAVHIKI
ZVIMWE ZVINOKUDZIDZISWA NEVANHU
MUMWE MUMWE MUMWE MUMWE MUNYAYA
ZVINHU ZVAKAITA LAWYER
DHURIRO YAKANAKA MUTEMO
ZVAUNODZIDZISA MAZVO NEMAGWARO
Tiri pano ...
KUSANGWA KWENHU SIMBA
Isu tiri mubasa renyu neyemhosva yedu inonyanya kugadziriswa mune zvekugara uye masango emasango.
Tinoda kugadzirisa matambudziko ako ose nemugweta wedu uyo ​​akaita basa rekudzidzira pane zveimba uye kunyanya 2B ine mitemo yakawanda yemitemo munyika yedu.
Mashoko ane chokuita ne2B
Tinochengetedza kodzero dzako dzose nenzira yepamutemo uye yezvakaipa, maererano neBitcoin, Blockchain uye mari yose yakaenzana, zvose zviri kuwirirana uye zvepamutemo.
We akasimbisa yokutanga nemasangano ari, Association of Virtual Currency kudzivirira kodzero dzako nyanzvi dzemutemo consultants muTurkey.
Gweta Antalya / Tinodzivirira kodzero dzevatorwa munyika yedu uye kodzero dzevanhu vedu mumutemo wenyika dzakawanda.
Turkey mudare pamberi dzedu masangano vatorwa, apo isu kudzivirira kodzero vagari vedu uye marudzi simba kubva Court.
20 makore ane ruzivo nokuda kwenyu pamativi ose
Our hofisi, vatevedzere mutemo, mutemo zvokutengeserana, mashoko michina mutemo, mutemo mhuri, Real Estate mutemo uye payables vari kunyanya pamutemo mapazi ose mutemo uyewo vanoziva dzakawanda chisarudzo dare anopawo pamutemo shanduro minamato zviitwe uye kutengesa zvivako pasi vatorwa. hofisi yedu vachangobva yakagamuchira kurumbidzwa kukuru munyika chaivo mari, rakapotsa mari uye rakapotsa mari exchanges migodhi, zvigadziriswe. kuti zvichemo penhau iyi uye rinopawo Consulting mabasa anoenderana inivhesitimendi. Turkey uye Antalya uyewo Dursun Mehmet yose sezvo kwedu chinangwa Advocacy Office, pose kutora matanho kunzvenga kurasikirwa kodzero dzedu nemakasitoma, kana kodzero dzavo dzave kwaitirwei ndiko dzosera zvokuti maoko mutemo.
Mabasa Okutsigira uye nzira yatinoshanda nayo
Nyanzvi dzedu dzemutemo neboka redu rose nguva dzose vari mubasa renyu kuita mabasa ose anodiwa kwamuri.
Marejikiti edu anomiririra iwe sevamiririri vekodzero dzako mumatare ese nemasangano.
Zvose mazano ekubvunzurudza anodiwa kuchengetedza kodzero dzemakambani ako pasi pose uye kunyanya munyika yedu anopiwa nemagweta edu.
Kupa mazano kune mumwe nomumwe
zano zvose zvakafanira kudzivirira kodzero dzako, kodzero, kodzero, etc. nokuvapo edu, zvedu magweta uye tsvimbo nyaya dzose kurondedzera yakapiwa munyika yose kunyanya kuTurkey.
Mumwe Nomumwe uye Nhepfenyuro Dzemitemo Yese
Nyanzvi dzedu dzemutemo dzinotora matanho ose anodiwa kuitira kuchengetedza kodzero dzako dzepamutemo uye kutambura kurasikirwa kodzero munharaunda yekushandiswa, kuratidzirwa, kuchengetedzwa, kutengesa, kushandiswa kwehupfumi kunowanikwa kune masunharaunda ose enyika uye munyika dzakawanda.
Vatongi vedu vari kutevera zviitiko zvose zvinoitika.
magweta edu tsanangudzo dzinodzidzisa
Zvinyorwa uye zvakaratidzwa zvevhidhiyo pamusoro pezvinyorwa uye hurukuro inokosha.
Shingairira Mazano Emazuva Ano Kubva Masayendisiti Edu
Nhasi uye ruzivo rwemashoko mundima yemutemo zvinogona kuwanikwa munyaya dzedu.
Iwe unogona kuona nzira dzedu kune nyaya maererano nekushandura mitemo uye ikozvino mhosva yemhosva. Apo patinopa vateereri vedu nebasa rinobudirira mumakakatanwa emitemo, tinotevera zvirikuitika mumutemo nemitemo mitsva yemitemo uye tinoishandisa mumatare emutemo.
Konu Inzwa wakasununguka kutitaurira pazvinhu zvose zviri mumutemo. "
Pamusoro peiyo General Data Dziviriro Regulation (GDPR)
-chaiyeiye, European Human Rights Law
Kvkk Matanho Ekutonga
Kuchengetedza uye Kuraswa Kwemunhu data
Chii chinonzi Dhata Yega, Yega Dziviriro Dziviriro 2019
Muyananisi Attorney Mehmet Dursun
Bvunzurudza NezveNew Mediation System
Hurukuro paIndaneti Mediation System
Isu, Mehmet Dursun, gadzirisa matambudziko ako akapfuura sevatongi uye udzivise zvinetso zvemuzouya.
Usanonoka kutaura nesu.
Kusvibiswa Nevavakidzani, Meltem Blv. Kwete: 11 Antalyaspor Sitesi A2 Block Floor Apartment: 21, 07060 Muratpaşa / Antalya